Sida loo dar subtitles in iMovie 08/09/11 - dar Text in iMovie
iMovie yimaado oo leh qaababka Cinwaan badan si aad si xirfad leh saamayn horyaalka Raadinta aad iMovie videos. Waxaa jira sababo badan oo aad rabto in aad subtitles daro in aad videos iyo filimada, tusaale ahaan, waxaad ku soo bixi video ka YouTube waxa ku jira dalka Jarmalka oo aad rabto inaad ku darto Ingiriisi subtitles waa in ay si aad saaxiibo u fahmi karaan. Ama waxa aad sameeyey filim guriga oo aad rabto inaad ku darto subtitles in iMovie in lagu daro qaar ka mid ah dareen gaar ah iyo sawirrada si aad filimada. Ama aad rabtid in aad ku darto credits xiritaanka qaar ka mid ah. Si kastaba, subtitles in mararka qaar loo baahan yahay oo muhiim u ah filim wanaagsan. Oo weliba ku daray subtitles in filimada ee iMovie waa mid aad u fudud. Hadda raac tallaabooyinka ku darto subtitles in iMovie.
Qaybta 1aad: Sida loo subtitles daro in videos in iMovie
Qeybta 2: Hab fudud in subtitles daro in videos ee Mac
Tallaabada 1. Fur mashruuca iMovie aad
Fadlan hubi in aad bilowday mashruuc iMovie samaysan. Tag File> New Project ku darto mashruuc cusub. Jiid video clips ka browser dhacdo in mashruuca ka.
Tallaabada 2. Dooro style horyaalka ah iyo waxa ka codsan
Dooro T horyaalka ka bar menu. Waxaad ku eegaan karo style horyaalka by dhaqaaqin aad mouse u badan. Dooro mid ka mid ah oo aad jeclaan lahayd in aad dalbato oo jiidi ka badan si aad mashruuca ee meesha aad rabto in lagu daro horyaalka.
Haddii aad rabto in aad ku darto subtitles dhexeeya clips video, jiidi style ilaa bar cagaar ah u muuqataa hor clip ah. Ka dib marka aad sii daayo mouse, suuqa kala Asalka ah arbushin doonaa, weydiinaya in aad doorato asalka u subtitles aad. Dooro asalka aad jeceshahay, oo waxaad arki doontaa subtitles soo bandhigay ee Mashruuca.
Haddii aad rabto in aad subtitles daro in video ah sida caption, kaliya aad u soo jiidi kartaa qaab meeshii aad rabto in aad ku darto subtitles. Uma baahnid in aad si ay u doortaan midabka asalka ah, sida Title waa laga dumin doonaa clip ah.
Tallaabada 3. Ku qor text koobab aad
Your text in hadda la iftiimiyay doonaa daawadayaasha iyo waad bedeli kartaa in ay wax kasta oo aad jeceshahay. Tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad beddesho style font ee subtitles ah, waxaad tagi kartaa tusiya noocyada> beddel noocyada in la beddelo font midabka, qaabka, cabbirka, wejiga, iwm
Wixii subtitles dhexeeya video clips, aad ku eegaan karo oo la soo bandhigi doonaa sidan oo kale:
Wixii subtitles on video clips, waxaad ku arki doontaa sida tan:
Tallaabada 4. Change mudada
Hadda idinku waxaad ku daray subtitles mashruuca iyo videos iMovie. Haddii aad rabto in aad beddesho muddada subtitles iMovie, aad double-riixi kartaa clip horyaalka iyo beddelo Duration ee Isbatooraha ama kaliya jiidi slider ee mashruuca si ay u beddesho iyo muddo.
Haddii aad rabto in aad si fudud oo si deg deg ah ku darto subtitles si aad video files, video kale oo awood badan sixiddiisa qaylqaylin Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) waxaa lagu talinayaa. Waxa ay taageertaa qaabab video kala duwan sida MP4, FLV, AVI, VOB, 3GP, ASF, MOV, F4V, M4V, Mpg oo dheeraad ah, si aadan u baahan tahay si ay u badalo si iMovie taageeray qaabab. Hadda akhriyey deg deg ah oo ku saabsan sida loo dar subtitles la isticmaalayo qalab this. Baro wax badan oo >>
Tallaabada 1. dejinta faylasha aad
Ka dib markii socda software this, dooro "16: 9" ama "4: 3" in la dhiso mashruuc cusub. Markaas si toos ah jiidi-n-hoos u photos videos ama si aad u track u dhigma. Halkan browser warbaahinta ah waa in aad ku haboon files ka Lugood maktabadda, iMovie, iwm heli ..
Tallaabada 2. Add iyo astaysto subtitles
Ka dib markii in, ku dhufatey "Edit" button oo taga si ay "Text" tab in ay ku eegaan style horyaalka bixiyo. Dooro mid ka mid ah oo aad jeceshahay iyo click double in aad ku darto si file video ah. Markaas double guji sanduuqa qoraalka si ay u galaan erayada ama la beddelo Font, xajmiga iyo midabka qoraalo aad.
Tallaabada 3. Dhoofinta aad file la subtitles
Ka dib markii ay ku daray subtitles, guji "Dhoofinta" si uu u badbaadiyo file. Waxaa jira afar siyaabood oo aad ku doorato: "Abuuritaanka Video", "Dhoofinta in Device", "koombiyuutarka si Waxaad Tube" iyo "Gubasho DVD". Dooro sida aad u rabto in la badbaadiyo ama la wadaagto aad videos oo guji "Abuur".
> Resource > iMovie > Sida loo dar subtitles in Videos iyo Movies in iMovie